Warshadda Cunnada Shiinaha ee Fasalka GFS Tank iyo soosaarayaasha | Boselan
Waxaan buuxin karnaa shuruudaha heerka cunnada si aan u hubinno badbaadada iyo ilaalinta deegaanka ee deeq-bixiyeyaasha. Codsiga: keydinta hadhuudhka, bariiska, sarreenka, masagada, soybean iyo hadhuudh.
Glass fasalka cuntada lagu kariyey haanta birta waxaa loo isticmaalaa kaydinta cuntada ama waxyaabaha la cuni karo ee leh baahiyo gaar ah Midabka haanta guud ahaan waa caddaan, shuruudaha gaarka ahna waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo doorashada macmiilka. Shuruudihiisa ayaa ka sarreeya xulashada agabyada cayriinna aad ayey u adag yihiin. Waxaan si adag u raacaynaa heerka AWWA ee soosaarka waxaanan si adag u hubinaa caadooyinka. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaala soo xiriirno waxyaabaha ku saabsan tilmaamayaasha gaarka ah iyo shuruudaha qaabeynta.
Taangiyada BSL waxay ku adkaysanayaan inay isticmaalaan Waraaqda Birta leh ee loo yaqaan 'Iron Rolled Carbon steel Sheet'. Waxaa si gaar ah loo soo saaray hanaankan la soo raray. U oggolow waxqabadka jireed ee aan caadiga ahayn; tirtirayaa cillad kasta oo kalluun ah. Qaab dhismeedka dhalada Superfine ee lakabka enameled wuxuu siinayaa taarikada birta leh dabacsanaan iyo cimri dherer badan.
Hore: Hay hayaha keydinta gaaska Membrane
Xiga: Taangiyada madaxbanaan
Kaydinta Bulkiska qallalan ee Silos
Kaydinta Hadhuudhka Silo
Kaydinta Midho Silos
Steel Silos ee Kaydinta Midhaha